Home Wararka Abiy Axmed oo xabsiga ka siidaayay Siyaasiyiin iyo wariyeyaal caan ah
Dowlada Ethiopia ayaa xabsiga ka sii deysay wariyaha caanka ah ee Eskinder Nega kadib in ka badan 18 bilood oo uu xirnaa.
Eskinder Nega ayaa la xiray bishii Juun 2020 ka dib dilkii muusikiiste Hachalu Hundessa, waxana uu ka mid ahaa dadkii lagu eedeeyay hurinta rabshadihii ka dhacay caasimadda Addis Ababa iyo gobolka ugu weyn dalkaas ee Oromia.
Sidoo kale Jawar Mohamed iyo Baqale Gabra oo gudoomiye iyo ku xigeen u kalla ahaa xisbiga OFC ee oromada ayaa la xiray dabayaaqadii junne 2020 kadib dilkii Fanan Haachalu Hundeesaa.
Abiye Maanta waxaa uu sheegay in loo baahanyahay dib u heshiisiin iyo iscafis Guud taasoo gogol xaar u sii ahayd sii daynta siyaasiyiinta Oromadda.
Previous articleColaadii beelaha dega Sool oo heshiis wadajira laga gaaray
Next articleRooble oo xafiiskiisa ka shaqaaleysiiyay qaar kamida mucaaradka! Maxa isbadalay?